कोरोनाका जस्तै देखिने लक्षणहरु मानसिक रोगका त हैनन् ? कसरी छुट्याउने ? – Dainik Lumbini
कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भए यता फेरि पनि मानसिहरुमा मनोबैज्ञानिक तनाव बढेर गएकोछ । कोभिड – १९ महामारीको समय सबैको लागि तनावपूर्ण समय हो ।
विपतिको बेला सामान्य डर , चिन्ता , बेचैनी , छट्पटी र तनाव हुनु स्वभाविक नै हो । यसलाई असामान्य अबस्थामा मानिसहरुमा देखिने स्वभाविक प्रतिक्रिया नै मानिन्छ ।
कोरोनाको संक्रमणको बेला मानसिक तनावका बिभिन्न लक्षणहरु देखिन्छन । तर
केही समयपछि धेरै जसोमा तनावका यस्ता लक्षणहरु बिस्तारै आफै कम भएर जान्छन । तर केहीमा भने मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगको जोखिम बढेर जान्छ ।
मनमा कुरा खेल्नु, झर्को लाग्नु , रिस उठ्नु , हातखुट्टा वा जिउ काप्नु, कट्कट् खानु वा झमझमाउनु, शरिर सिरिंग हुनु, मुख सुक्नु, पसिना आउनु, टाउको- पेट दुख्नु, घाँटी वा ढाड दुख्नु, रिगंटा लाग्नु, मुटुको चाल बढ्नु, भोक तथा निन्द्रा नलाग्नु, छिटो छिटो पिसाब लाग्नु, कब्जियत हुनु , शरिरमा थकान महसुस हुनु , श्वास फेर्न गाह्रो भएको महसुस हुनु, छाती भारी हुनु, ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नु, दुबिधामा पर्नु , चाडै विर्सनु, मन दुःखी हुनु, सामान्य भन्दा बढी डर ,चिन्ता , पिर पर्नु, छटपटि हुनु, निर्णय लिन नसक्नु, डर लाग्दो सपना देख्नु, पटक–पटक झस्कनु, निराश हुनु, कुनै कुरामा चाख नलाग्नु, आफू वा परिवार कसैलाई केही होला कि भन्ने डर लाग्नु, शरीर तातो बा चिसो भएको महसुस हुनु जस्ता लक्षणहरु तनावको बेला देखिन सक्छन् ।
तनावपुर्ण वा असहज अबस्थामा देखिने यस्ता लक्षणहरु सामान्य र स्वभाविक लक्षणहरु हुन ।
तर यस्ता लक्षणहरु लामो समयसम्म रहिरहे भने मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगको जोखिम बढ्छ । यस्ता समस्याले आफ्नो दैनिक व्यवहार , ब्यक्तित्व , सम्बन्ध , सोच , बिचार , भावना आदिमा असर पुर्याउन थाल्यो भने चाहिँ मानसिक रोगको रुपमा लिनुपर्छ ।
मानसिक तनाव , मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगमा पनि विभिन्न किसिमका शारीरिक लक्षणहरु देखिन्छन् ।
कोरोनाको संक्रमणको समयमा एन्जाईटी डिसअडर्स ( डर , चिन्ता ,बेचैनी ), प्यानिक डिसअडर्स (एक्कासि बिना कारण उत्पन्न हुने अत्याधिक त्रास ) , कन्भर्सन डिसअडर्स(डर, त्रास , तनाबको कारणले देखिने मनोबैज्ञानिक समस्या) , मानसिक आघात (पिडादायिक घटना पछि उत्पन्न हुने एक किसिमको मानसिक रोग ) , एक्युट स्टेस डिसअडर्स (तत्कालै देखा पर्ने तनाब जन्य समस्या ),
जाँड रक्सि तथा लागू प्रदार्थको कुलत , एडजस्टमेन्ट डिसअडर्स ( समायोजनको समस्या , परिस्थितिसँग जुझ्न नसकिरहेको अबस्था) , डिप्रेसन ( नैरस्यता, दिक्दारिपन ),
सामाजिक संजालको लत , अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअडर्स ( एउटै सोच वा बिचार आईरहने तथा एउटै कार्य लगातार धेरै पटक दोहोर्‍याई रहने मानसिक रोग ) तथा अन्य चिन्ता जन्य मानसिक रोगहरुको जोखिम बढेर जान्छ । यि मानसिक रोगहरुमा पनि विभिन्न किसिमका शारीरिक लक्षणहरु देखिन्छन ।
जस्तो: टाउको दुख्ने,पेट दुख्ने, हातखुट्टा कट्कटी खाने, झम्झमाउने , रिंगटा लाग्ने, कव्जियत वा पखाला लाग्ने ,पेट फुल्ने वा पेट ढुस्स हुने , उल्टी हुने, वाक्वाकी लाग्ने,भोक नलाग्ने , खानाको स्वाद मीठो नहुने,
छाती भारी हुने, छाटी दुख्ने , छाटी पोल्ने , मुटु चस्किने,मुटु ढुक्ढुक् हुने, जिउ तात्ने वा चिसो हुने जस्ता शारीरिक लक्षणहरु मानसिक रोगमा देखिन्छन ।
यस्ता लक्षणहरु देखिँदा आफुमा कोभिड – १९ रोग पो लाग्यो कि भनेर धेरै ब्यक्तिहरु भयभीत हुने गरेको पनि देखिन्छ ।
मानसिक रोगका कारण यस्ता लक्षणहरु देखिने भएकाले शारीरिक परिक्षण गर्दा भने शरिरमा कुनै पनि खराबी देखिदैन ।
तनाव वा मानसिक रोगका कारण हुने यस्ता शारीरिक लक्षणहरु महसुस गरि आफुलाई कोरोना भाईसर संक्रमण भयो भन्दै परिक्षणका लागि अस्पताल धाउनेहरु पनि धेरै हुन सक्छन् ।
कोभिड – १९ हुँदा ज्वरो आउने , सुख्खा खोकी लाग्ने , सास छोटो हुने वा स्याँस्याँ हुने,श्वास फेर्न कठिनाई हुने , कोरोना भाइरसका केही मुख्य लक्षण हुन् ।
साथै कोभिड – १९ का केही बिरामीमा
थकान कमजोरी,टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, घाँटी दुख्ने, स्वाद र बास्ना हराउने गरेको पनि पाइएको छ। केही बिरामीमा घ्राणशक्ति अर्थात् सुँघ्ने क्षमता पनि शिथिल भएको पाइएको छ ।
साथै आँखा हल्का रातो हुने, पखाला लाग्ने,
उल्टी हुने, पेट दुख्ने र पाचन प्रणालीमा गडबडी हुने जस्ता लक्षणहरु पनि देखिन सक्छन् ।
मानसिक द्धिविधामा पर्ने, निन्द्रा नलाग्ने , स्मरणशक्तिमा कमि , मुटुको धडकन बढने, मुटुको मांशपेशी दुख्ने/पोल्ने , हाछ्यु आउने, घाँटी खसखस हुने र बेचैनी वा छटपटी हुने जस्ता थप लक्षणहरु नयाँ प्रजातीको कोरोना भाइसर संक्रमितहरुमा देखिएको छ ।
कोभिड -१९ मा देखिन लक्षणहरु र मानसिक तनाव वा मानसिक रोगमा देखिने शारीरिक लक्षणहरु झट्ट हेर्दा उस्तै लागेता पनि यी दुई फरक किसिमका रोग हुन । कोभिड -१९ शारीरिक रोग हो भने मानसिक रोग मनसँग सम्बन्धि रोग हो ।
कसैमा कोभिड- १९ का जस्ता लक्षणहरु देखिएमा वा आफू संक्रमित भएको आशंका लागेमा सर्बप्रथम स्वास्थ्य परिक्षण नै गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा कोरोना नेगेटिभ देखिएमा यि लक्षणहरु मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगका लक्षणहरु हुन सक्छन् ।
यस्तो अबस्थामा मनोरोग विशेषज्ञ , मनोविद् वा मनोपरामर्शदातालाई भेटनुपर्छ ।
कोभिड -१९ वा शारीरिक रोग लाग्दा यसका लक्षणहरु सिमित हुन्छन । कोभिड – १९ बाट संक्रमित भएका ब्यक्तिहरुले प्राय समान किसिमको लक्षण महसुस गर्छन । तर मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगमा देखिने शारीरिक लक्षणहरु असिमित हुन हुन्छन । सबै अंग वा प्रणालीहरुमा लक्षणहरु देखिन सक्छन ।
मानसिक रोगमा देखिने शारीरिक लक्षण छोटो समयको लागि हुन्छ र यी लक्षणहरु परिवर्तन भई रहन्छन् । तर शारीरिक रोगमा भने निरन्तर २४ अौ घण्टा जसो एकै किसिमका लक्षणहरु रहिरहन्छन ।
कोभिड – १९ मा प्राय लक्षणहरु शारीरिक किसिमका हुन्छन । मनोसामाजिक समस्या वा मनोरोगमा भने शारीरिक लक्षणहरुका साथसाथै मनसँग सम्बन्धि लक्षणहरु जस्तो: डरलाग्ने , चिन्ता लाग्ने, मनमा कुरा खेल्ने , मन दुखी हुने , पिर पर्ने आदि जस्ता लक्षणहरु लेखिन्छन ।
त्यसैगरि मनोसामाजिक समस्या वा मनोरोगमा व्यबहारसँग सम्बन्धि लक्षणहरु – रुने, एक्लै बस्ने, नबोल्ने, आबस्यकता भन्दा बढि सतर्कता अपनाउने, जाडँ रक्सी तथा लागू प्रदार्थको सेवन गर्न थाल्ने जस्ता व्यवहार देखाउन सक्छन् ।
निषेधाज्ञाको अबधि भरि फोन मार्फत निशुल्क मनोपरामर्श सेवाक‍ो व्यबस्था मार्क नेपालले गरेको छ । जसको लागि ९८१३५२७७३२ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ
मुसिकोटमा एक जना पनि शंका लाग्दो विरामी छैनः मेयर सापकोटा